Maamulka Samsun Biyo iyo bullaacado si ay u soo iibiyaan 67 Shaqaale Dowladeed | RayHaber | raillynews
HomeGUUDShaqooyinkaMaamulka Samsun Biyo iyo bullaacado si ay u soo iibiyaan 67 shaqaale rayid ah
17 / 03 / 2020 Shaqooyinka, GUUD
maamulka samsun biyaha iyo bullaacadaha waxay sameyn doonaan shaqaale dowladeed
BIYAHA SAMSUN IYO QALBINKA QARANKA GUUD EE XAFIISKA XAFIISKA XAFIISKA MARKA HORE
In laga shaqeeyo iyada oo la hoos imanayo Agaasimaha Guud ee Sharciga Shaqaalaha Rayidka ah ee Lambarka 657 ee ku jira Maareeyaha Guud ee Maareynta Biyaha iyo bulaacada. Iyada oo la raacayo qodobbada Xeerka Imtixaannada iyo Ballamada Xilliyada Koowaad ee Meeleynta Degmooyinka, shaqaalaha rayidka waxaa lagu qori doonaa ballamo furan oo loo banneeyay jagooyinka banaan ee la cayimay, iyadoo la bixinayo in cinwaanka, fasalka, tirada, shahaadooyinka, nooca KPSS, dhibcaha saldhigga KPSS iyo shuruudo kale ay ka hooseeyaan.
N Cinwaanka Squad fasalka Shahaadada Squad piece shahaadooyinka Gender KPSS
nooca Saldhigga 'KPSS'
1 injineer TH 8 1 Si aad uga qalin jabiso barnaamijka Injineerinka kombiyuutarka ee kulliyadaha kuliyaadka bixiya waxbarashada hoose Lab / Dheddig P3 70
2 injineer TH 8 2 Si aad uga qalin jabiso barnaamijka Injineerinka Deegaanka ee kulliyadaha bixiya kuliyadaha shahaadada koowaad Lab / Dheddig P3 70
3 injineer TH 8 3 Si aad uga qalin jabiso barnaamijka Injineerka Korantada Koronto ee kulliyadaha bixiya waxbarashada hoose Lab / Dheddig P3 70
4 injineer TH 8 1 Si aad uga qalin jabiso barnaamijyada Kulliyadaha Kontaroolka ah ee Kontaroolka Maskaxda iyo Qalabka ee kulliyadaha bixiya waxbarashada heerka koowaad Lab / Dheddig P3 70
5 injineer TH 8 3 Ka qalin jabiyay barnaamijka injineerinka shahaadada koowaad ee kulliyadaha bixiya waxbarashada shahaadada koowaad Lab / Dheddig P3 70
6 injineer TH 8 5 In laga qalinjabiyo barnaamijka shahaadada koowaad ee injineernimada madaniga ah ee kulliyadaha bixiya waxbarashada heerka koowaad Lab / Dheddig P3 70
7 injineer TH 8 5 Inay ka qalin jabiso barnaamijka injineerinka injineerinka ee kulliyadaha bixiya waxbarashada heerka heerka koowaad Lab / Dheddig P3 70
8 dhise TH 8 1 Ka qalin-jabiyey kuliyadaha shahaadada kuliyadaha Lab / Dheddig P3 70
9 farmashiyaha TH 8 2 Ka qalin-jabiya barnaamijyada Kimistari ee shahaadada koowaad ee kulliyadaha Lab / Dheddig P3 70
10 farsamo yaqaan TH 8 6 Si aad uga qalin-jabiso Barnaamijka Isku-dhafka Mashiinka ee Iskuullada Xirfadaha Lab / Dheddig P93 70
11 farsamo yaqaan TH 9 1 Si aad uga qalin jabiso Barnaamijka Iskuxirka Barnaamijyada kumbuyuutarka ee iskuulada Mihnadaha Lab / Dheddig P93 70
12 farsamo yaqaan TH 9 1 Ka qalin-jabiya Barnaamijka Shahaadada Isku-xidhka Caafimaadka Deegaanka ama Deegaanka ee Iskuulada Mihnadaha Lab / Dheddig P93 70
13 farsamo yaqaan TH 9 10 Si aad uga qalin jabiso Farsamada Dhismaha ama Barnaamijka Iskuxirka Tiknolojiyadda Dhismaha ee iskuulada xirfadaha Lab / Dheddig P93 70
14 farsamo yaqaan TH 9 8 Si aad uga qalin jabiso Khadka farsamada ee Mapka Farsamada ama Khariidadda Kulliyadda iyo Kulliyadda Cadastral Associate Degree Lab / Dheddig P93 70
15 farsamo yaqaan TH 9 3 Ka qalin jabiyay Barnaamijka Iskuxirka Korontada ee Iskuulada Mihnadaha Lab / Dheddig P93 70
16 farsamo yaqaan TH 9 2 Si aad uga qalin-jabiso Iskuullada Xirfadaha Elektiroonigga ah, Farsamada Korantada Farsamada Korantada ama Barnaamijka Isku-Duwaha Tikniyoolaji Elektiroonigga ah Lab / Dheddig P93 70
17 ururiyaha GPP 9 - 10-11 11 Ka qalin-jabiyey mid ka mid ah barnaamijyada hoose ee cilmiga dhaqaalaha, Xisaabaadka, Maamulka Ganacsiga, Maamulka Dadweynaha, Sayniska Siyaasadda iyo Maamulka Dadweynaha, Maaliyadda, Nidaamyada Macluumaadka Xisaabaadka Lab / Dheddig P3 70
18 garyaqaan AH 7 2 Ka qalin-jabiya kulliyadaha sharciga ee Jaamacadaha Lab / Dheddig P3 70
GUUD iyo SHURUUDAHA GAARKA AH EE CODSASHADA
Shuruuda guud iyo tan gaarka ah ee la raaci karo codsiyada loo qabanayo jagooyinka shaqaalaha rayidka ah ee kor ku xusan waa sida soo socota.
1) SHURUUDAHA GUUD EE CODSASHADA
Musharraxiinta u adeegi doona jagada sarkaal shaqaale dowladeed waa inay lahaadaan shuruudaha guud ee soo socda ee lagu sheegay cutubka (A) ee Qodobka 657aad ee Sharciga Shaqaalaha Rayidka ah ee Lambarka 48;
a) Inaad tahay muwaadin Turki ah,
c) Xitaa haddii muddooyinka ku xusan qodobka 53aad ee Xeerka Ciqaabta Turkiga ay dhaafeen; Dembiyada ka dhanka ah amniga gobolka, dambiyada ka dhanka ah amarka dastuurka iyo ku shaqeynta amarkan, lunsashada, baadda, laaluushka, xatooyada, khayaanada, khayaanada, musuqmaasuqa, anshax xumada, khayaanada, xitaa haddii lagu xukumo xabsi ama cafis sanad ama wax ka badan dambiile ula kac ah. In aan lagu xukumin musalifnimo, khiyaanada iibka, ku xadgudubka waxqabadka, bixinta hantida dambiga ama tahriibinta,
d) Marka la eego heerka militariga ee murashaxiinta ragga ah; aan wax shaqo ah ku lahayn adeegga milatariga ama uusan gaarin da'da adeegga militariga, ama haddii isagu / iyadu ay gaadhay da'da militariga militariga, uu ka soo shaqeeyey adeegga militariga firfircoon ama dib loo dhigay ama loo gudbiyey fasalka kaydka,
e) Aan lahayn jirro maskaxeed ama curyaannimo jidheed oo ka horjoogsanaysa inuu si joogto ah u guto waajibaadkiisa,
f) Inuu buuxiyo shuruudaha kale ee codsiyada loogu talagalay jagooyinka lagu dhawaaqay,
g) Codsi ku saabsan shaqaalihii uu dalbaday (Musharax walba wuxuu quseeyaa kaliya hal shaqaale oo dhajiyay iyadoo loo eegayo heerka waxbarashadooda.)
2) SHURUUDAHA GAARKA AH EE CODSASHADA
a) Si loo oofiyo shuruudaha waxbarashadda sida tii ugu dambeysay ee dugsiga ka qalin jabiyay ee cinwaanada lagu dhawaaqay iyo in la helo ugu yar ee KPSS dhibcaha noocyada dhibcaha ee lagu qeexay imtixaanka Xulashada Shacbiga ee Dadweynaha 2018 (KPSS) ee ka soo horjeedda magacyada la soo iibsanayo,
t) In aan laga xayuubin hay’adaha dowliga ah iyo hay’adihii uu horay u shaqeeyey, asluub ​​la’aan awgeed ama asluub ​​ahaaneed awgeed.,
3) TILMAAMAHA LOO BAAHAN YAHAY MIDNIMADA MARKA LAGU DIIWAANJIYO
Intii lagu jiray arjiga;
Foomka Codsiga ee ka socda Hay'adayada ama Agaasinka Guud http://www.saski.gov.tr waxaa laga heli doonaa cinwaanka internetka,
a) Nuqul Kaarka Aqoonsiga ama Kaarka Aqoonsiga,
b) Nuqulkii asalka ahaa ama nootaayey ee shahaadada ama shahaadada qalinjebinta, ama shahaadada qalinjabinta oo leh lambar koodhadh ah oo lagu heli karo dawladda E (nuqulada waxaa cadayn kara maamulkayaga, waa haddii asalka la soo bandhigo.)
c) Nuqulkii asalka ahaa ama nootaayey ee shahaadada u dhigma ee ardayda ka qalin jebisa dugsiga shisheeye, (Nuqulada waxaa caddeynaya maamulkayaga, waa haddii asalka la soo bandhigo.)
d) Daabacaadda kumbuyuutar ee 'Barcode' laga soo qaatay shabakadda ÖSYM ee Dukumiintiga Natiijada KPSS,
e) Bayaanka murashaxiinta ragga ah ee ah inaysan la xiriirin adeegga militariga,
f) Bayaanka in isaga / iyadu aysan wax caqabad ah u haynin gudashada waajibaadkiisa si joogto ah,
g) 4 sawir oo bayoolaji ah, (1 ayaa lagu dhejin doonaa foomka)
h) Nuqulkii asalka ahaa ee laysanka qareenka ama nuqul sharciyeysan oo sharci yaqaan ah oo loogu talagalay shaqaalaha qareenka (Nuqulada waxaa caddeyn kara maamulkayaga, waa haddii asalka la soo bandhigo.)
i) Codsi ku saabsan shaqaalaha uu codsaday,
4- Goobta Codsashada, Taariiqda, HABKA IYO DALKA
Murashaxiinta waxay qaadan karaan imtixaanka afka;
a) Musharaxiinta, oo ay weheliso dukumentiyada la codsaday muddadii dalabka Laga bilaabo 06.04.2020 illaa 17.04.2020 Jimcaha illaa 17.00 (maalmaha shaqada inta u dhexeysa 08.00-17.00) wey awoodi doonaan inay dalbadaan.
Musharixiinta waa inay soo gudbiyaan dukumiintiyada codsigooda;
- Agaasimeheenna guud ee deegaanka elektaroonigga ah http://www.saski.gov.tr cinwaanka internetka,
- Shaqsi ahaan ama boostada diiwaangashan, waxay awoodi doonaan inay diraan Agaasimaha Guud ee Kheyraadka Dadweynaha iyo Waxbarashada Maareynta Biyaha iyo bulaacada Samsun (Denizevleri Mahallesi 228. Sokak No: 4 Atakum / Samsun). (Agaasimeheenna guud mas'uul kama noqon doono dib u dhaca boostada.)
b) Codsiyada lagu sameeyo macluumaadka maqan iyo dukumiintiyada ama haddii aqoontooda aysan ku habooneyn ma qiimeyn doono Agaasinka Guud.
c) Dib u dhacyada boostada iyo codsiyada aan lagu sameyn mudada lagu sheegay ogeysiiska lama tixgelin doono.
5- QIIMEYNTA CODSIYADA-CODSIGII LAGU SAMEEYO
a) Musharaxa waxaa lagu casuumi doonaa imtixaanka afka ah sicirka shan jeer tirada jagooyinka banaan ee la magacaabayo, laga bilaabo musharraxiinta ugu sareysa, iyadoo la hubinaayo u hogaansanaanta lambarka musharixiinta 'TR ID' iyo diiwaanada GeneralSYM ee Agaasinka Guud.
b) Murashaxiinta kale ee leh isla dhibco ay la mid yihiin musharraxii ugu dambeeyay ee loogu yeero imtixaanka waxaa loogu yeeri doonaa imtixaanka.
c) Murashaxiinta u qalma inay qaataan imtixaanka afka ah iyo dhibcaha KPSS iyo meesha iyo waqtiga imtixaanka Isniin, 20.04.2020 Agaasimaheena Guud http://www.saski.gov.tr lagu shaacin doonaa internetka.
d) Musharaxiinta codsigooda la aqbalay oo loogu yeeray imtixaanka, kuwaas oo macluumaadkooda aqoonsiga iyo goobta iyo taariikhda imtixaanka la heli karo "Dokumentiyada Galitaanka Imtixaanka" Waxay awood u yeelan doonaan inay ka helaan cinwaanka internet-ka ee www.saski.gov.tr.
e) Musharaxiinta aan xaq u laheyn inay galaan imtixaanka lama ogeysiin doono.
6- Goobta Imtixaanaadka, WAQTIGA IYO MAWDUUCADA
Xarunta guud ee shirarka yar yar ee maaraynta iyo bulaacadaha ee Samsun (Denizevleri Mahallesi 228. Sokak No: 4 Atakum / SAMSUN); shaqaalaysiinta 27/04/2020-08/05/2020 Baadhitaan afka ah ayaa la qaban doonaa inta u dhaxaysa taariikhaha. Haddii baaritaanka afka aan lagu dhammeyn karin isla maalintaas, waa la sii wadi doonaa maalinta ku xigta.
Mabaadi'da Atatürk iyo Taariikhda Kacaanka
657 Sharciga Shaqaalaha Rayidka ah
Sharci dejinta aasaasiga ah ee laxiriirta Maamulada Degmooyinka
Waxay daboolaysaa cabirka xirfadda iyo aqoonta la taaban karo iyo xirfadaha la xiriira cinwaanka shaqaalaha.
7- QIIMAYNTA Imtixaanaadka iyo u-hoggaansanaanta natiijooyinka imtixaanka
Qiimaynta Imtixaanka; Dastuurka Turkey, Mabaadi'da Ataturk iyo History of Revolution, 657 Law, Dawlada Hoose 15 ee dhibcood arrimaha sharciga aasaasiga ah ee la xiriira, halka horyaalka kooxda aqoonta xirfadeed iyo wax ku ool ah iyo si loo cabbiro awoodda ka dhigay in ka badan 40 dhibcood, wadar ahaan 100 dhibcood. Si loogu guuleysto imtixaanka, celceliska xisaabta ee dhibcaha ay bixiyeen xubnaha guddiga imtixaanka waa inay ahaadaan ugu yaraan 60. Murashaxiinta guusha guud ee musharixiinta; Celceliska xisaabta natiijada imtixaanka afka iyo dhibcaha KPSS ee uu sameeyay maamulkeenna waxaa go'aan ka gaari doona oo ku dhawaaqi doona websaydhka maamulka.
Haddii dhibcaha guusha musharraxiinta ay isku mid yihiin, dhibcaha sare ee dhibcaha KPSS ayaa la siiyaa mudnaanta. Laga bilaabo natiijada ugu sarreysa ee guusha, tirada musharrixiinta joogtada ah ayaa la go'aamin doonaa iyo sidoo kale tirada musharraxiinta joogtada ah iyo tirada musharraxiinta beddela. Liiska liiska murashaxiinta ugu muhiimsan iyo keydka waxaa lagu shaacin doonaa cinwaanka internetka ee maamulka waxaana ogeysiis qoraal ah la siin doonaa kuwa ku qoran liiska.
Gudiga imtixaanka; wuxuu xaq u leeyahay inuu helo ama midkoodna kuwa lagu shaaciyey ku dhawaaqista imtixaanka haddii ay u arkaan qodobbada guusha inay hooseeyaan ama aysan ku filneyn cadhooyinka lagu dhawaaqay shaqaalaysiinta dhamaadka imtixaanka.
Inta lagu gudajiro codsiyada iyo habraaca, baaritaanada kuwa lagu helo inay sheegaan been abuur ama runta ku qarsadaan si kastaba waxaa loo arkaa mid aan shaqeynin oo shaqooyinkoodana lama sameyn. Xitaa haddii ballamaha kiisaska noocaas ah la go'aamiyo, shaqadooda waa la joojinayaa. Dadkani ma sheegan karaan wax xuquuq ah waxaana loo gudbin doonaa dacwad ciqaabeed Xeer Ilaaliyaha Guud.
Natiijooyinka imtixaanka waxaa rafcaan looga qaadan karaa iyadoo qoraal ah muddo toddobo maalmood gudahooda ah markii lagu dhawaaqo liiska guusha ee bogga shabakadda maamulka. Rafcaanada waxaa soo gabagabeynaya guddiga baaritaanka todoba maalmood gudahooda qofka ku shaqada leh waxaa lagu ogeysiinayaa qoraal.
Ogeysiiska Udhanka: Cusboonaysiinta Khadka bullaacadda (TCDD 4Regional Agaasinka Sivas Loko…
Ogeysiiska Soo Iibsiga: Biyaha roobka, bullaacadda, biyaha la cabbo iyo qaab-dhismeedka sayniska iyo düzenleme
Ogeysiiska Qaadashada: Shaqada bullaacadaha ayaa la qaban doonaa (Haydarpaşa Port)
Soo bandhigida hindise: Haydarpaşa Mashruuca Bullaacadaha
Maamulka Isgaarsiinta ayaa hindisada u sameyn doona Haydarpaşa.